Eden Hazard miyuu ciyaari karayaa kulanka berito ee Belgium iyo Italy? – Gool FM
(Lyon) 12 Juunyo 2016. Xiddiga Chelsea iyo xulka Belgium Eden Hazard ayaa ka cabanayay dhaawac cagta ah kaa oo ka soo gaaray tababarka xulkiisa xilli ay berito kulankooda furitaanka Euro 2016 ay la ciyaari doonaan xulka Talyaaniga.
25-jirka kabtanimada u xirnaa xulkiisa intii uu dhaawaca ku maqnaa daafaca Man City ee Vincent Kompany, ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo kulankooda furitaanka Euro goup E ee berito.
Sikastaba, tababaraha xulka Belgium Marc Wilmots ayaa kalsooni ku qaba in dhibaatada uu qabo Hazard aysan ka hor istaagi doonin inuu ku soo bilowdo kulanka ay magaalada Lyon kula yeelan doonaan Talyaaniga.
“ U maleyn maayo inuu dhaawacu yahay mid halis ah, jug uun,”. Tababare Wilmots ayaa sidaa yiri.
Wuxuuna sidoo kale ka waramay dhaawaca daafaca kooxda Barcelona ee Thomas Vermaelen wuxuuna yiri: “Thomas si fiican ayuu ka sameyanayay tababarka maalmihii ugu dambeeyay, gabi ahaana diyaar ayuu u yahay dagaalka, wax dhibaato ma qabo.”.
Xulka Belgium ayaa kulankooda furitaanka Euro 2016 la yeelan doona dalka khibrada badan u leh koobkan ee Talyaaniga iyagoo kulankooda xiga la yeelan doona Republic of Ireland 18-ka bisha halka kulankooda ugu dambeeya ee Group-ka ay la ciyaari doonaan xulka uu hogaaminayo Zlatan Ibrahimovic ee Sweden 22-ka bisha.
GOOGOOSKA: Turkey vs Croatia 0-1